जनता समाजवादी पार्टीमा ३ अध्यक्षः महन्थ, बाबुराम र उपेन्द्र - News Birat
जनता समाजवादी पार्टीमा ३ अध्यक्षः महन्थ, बाबुराम र उपेन्द्र
काठमाडौं, २५ जेठ-राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजावादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा ३ जना अध्यक्ष हुने भएका छन् । आज जनता समाजावादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने अन्तिम दिन हो । आज दल दर्ता गर्नलाई भए पनि जनता समाजावादीले नेतृत्व टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले दल दर्ता गर्न जानुभन्दा पहिला २ जना अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीका र १ जना संघीय परिषद्को अध्यक्ष हुने गरी छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य गंगा श्रेष्ठले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद्को अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्राई हुनेगरी छलफल भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जनता समाजवादीमा ५ जना पदाधिकारी रहनेगरी छलफल भएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘२ समितिका ३ जना अध्यक्ष र अन्य २ जना पदाधिकारी रहनेगरी छलफल भइरहेको छ, जसमा राजेन्द्र महतो र अशोक राईको नाम आएको छ ।’
गत वैशाखमा सत्ता पक्षका सांसदले समाजवादीका सांसद अपहरण गरेको आरोप समाजवादीले लगाउँदै आएको छ । उक्त अपहरण काण्डपछि हतार हतारमा १० वैशाखमा समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकता भएको थियो । एकता भए पनि कति जना अध्यक्ष हुने ? कोको अध्यक्ष हुने ? भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको ४५ दिनमा दल दर्ता गरी सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आज निवेदन दिएको ४५ दिन पुग्दै छ ।
आईतवार, २५ जेष्ठ २०७७, १५:४६ June 7, 2020 मा प्रकाशित